Zvigadzirwa vagadziri & vatengesi - China Zvigadzirwa fekitori
Cheertainer bhegi mubhokisi
Mugaba wemvura unovharika
Semi-Inobatika Jerry Anogona
Tinya / Bhegi
Chikafu giredhi LDPE cubitainer
20 litre chechener bhegi mubhokisi
Cheertainer bhegi mubhokisi chigadziko chitsva chinosanganisa kuchinjika kweBhegi muBhokisi uye zvakanakira zvirinani zvezvinhu zvakaomarara kana semi-zvakaomarara, izvo zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka kune dzese idzi sarudzo. Iyo inoumbwa necube-yakaumbwa, yakawanda-yakaturikidzana plastiki bhegi, pombi, kapu kana vharafu uye kadhibhodhi bhokisi.
Yedu cheertainer bhegi mubhokisi rakagadzirwa nemultilayer epurasitiki. Iyo yekunze layer (polyamide + polyethylene) inodzivirira kubva kuoksijeni uye unyoro; kuwanda kwayo uye kuumbwa kwayo kunogona kusiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kana chigadzirwa. Iyo yemukati layer (polyethylene) yakasununguka uye inopokana nekubvaruka.
BPA Yemahara Inovharika Mudziyo Mudziyo (ine Spigot)
FOOD-GRADE ISINA KUSHAMISWA KAKURU:
l LDPE mapurasitiki akagadzirwa neepamusoro mhando Japan mbishi zvinhu.
l Zvakatipoteredza zvine hushamwari zvisina chepfu
l Kwete BPA PVC kana DEHP
l Kwete epurasitiki PVC hwema
l Kunaka kwemvura hakuzokanganisike
Yakasiyana-siyana Kugona Sarudzo: 5L 10L 20L.
Cubitainers inogadzirwa neyepasi density polyethylene uye seyakaunganidzwa package, vanouya nebhokisi, mudziyo, chena polypropylene cap.
Midziyo nemabhokisi zvinotengeswa zvakasiyana, fekitori yedu iri kutengesa cubitainers muAlibaba online kweanopfuura makore gumi.
Yedu cubitainers inosangana neDAA zvinodikanwa uye zvese zvembishi zvinhu zvinovaita sarudzo huru yekuchengetedza mvura uye zvimwe zvakawanda zvingangodaro.
5 litre ultrasound gel bhegi
5 litre ultrasound gel bhegi igaba nyowani inosanganisa kuchinjika kweBhegi muBhokisi uye zvakavandudzwa zvakanakira zvidhoma zvakaomarara kana semi-zvakaomarara, izvo zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka kune dzese idzi sarudzo. Iyo inoumbwa necube-yakaumbwa, yakawanda-yakaturikidzana plastiki bhegi, pombi, kapu kana vharafu uye kadhibhodhi bhokisi.
5 litre ultrasound gel bhegi rakagadzirwa nemapurasitiki akawanda. Iyo yekunze layer (polyamide + polyethylene) inodzivirira kubva kuoksijeni uye unyoro; kuwanda kwayo uye kuumbwa kwayo kunogona kusiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kana chigadzirwa. Iyo yemukati layer (polyethylene) yakasununguka uye inopokana nekubvaruka.
Adblue yekupakira bhegi mubhokisi chigadziko chitsva chinosanganisa kuchinjika kweBhegi muBhokisi uye zvakanakira zvirinani zvezvinhu zvakaomarara kana semi-zvakaomarara, izvo zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka kune dzese idzi sarudzo. Iyo inoumbwa necube-yakaumbwa, yakawanda-yakaturikidzana plastiki bhegi, pombi, kapu kana vharafu uye kadhibhodhi bhokisi.
Adblue kurongedza kunoitwa nemapurasitiki akawanda. Iyo yekunze layer (polyamide + polyethylene) inodzivirira kubva kuoksijeni uye unyoro; kuwanda kwayo uye kuumbwa kwayo kunogona kusiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kana chigadzirwa. Iyo yemukati layer (polyethylene) yakasununguka uye inopokana nekubvaruka.
Adblue Jerry Anogona Midziyo ine kamwene
Mukuchenesa kwemotokari muswe gasi, iyi adblue Jerry Inogona Kudzivirira inogadzirwa neyepasi density polyethylene uye seyakaunganidzwa package, vanouya nebhokisi, mudziyo, chena polypropylene cap.
Midziyo nemabhokisi zvinotengeswa zvakasiyana.
Yedu adblue Jerry Inogona Midziyo inosangana nezvinodiwa zveDAA uye zvese zvezvigadzirwa zvinovaita sarudzo huru yekuchengetedza mvura uye zvimwe zvakawanda zvingangodaro.
Inobata 5 litre ultrasound gel cubitainer
Collapsible 5 litre ultrasound gel cubitainer inogadzirwa neyepasi density polyethylene uye seyakaunganidzwa package, vanouya nebhokisi, mudziyo, chena polypropylene cap.
Yedu inodonha 5 litre ultrasound gel cubitainers inosangana nezvinodiwa zveDAA uye zvese zvigadzirwa zvinovaita sarudzo huru yekuchengetera mvura uye zvimwe zvakawanda zvingangodaro.
Midziyo iyi inoshandiswa mukuzadza nekutora bhegi mubhokisi.
Iyo pombi ipombi yeplastiki ye polyethylene uye ine hafu-batidza on / off mubato wekutonga kuzere uye kunyatsoita kuyerera. Inogona kushandiswa kuturikira yakawanda isingatsve zvinwiwa kubva mumidziyo yedu.
General Ruzivo uye Tsananguro
Iyo 10l 20l inokwana Semi-Collapsible Jerry Inogona kugadzirwa nechikafu giredhi ldpe.
Icho mudziyo wemashandisirwo emhuri yekutakura nekuchengetedza mvura yekunwa.
KAIGUAN main mapakeji zvigadzirwa ndeye cheertainer (yakamira bhegi mubhokisi), ldpe cubitainer, inodonha mudziyo wemvura, semi-kupeta jeri anogona uye michina yekuzadza.
Kwete 15, Niutang Town, Wujin Dunhu, Changzhou Guta, Jiangsu Province, China.